MOE_THKIN's Reading List - MOE_THKIN - Wattpad
MOE_THKIN's Reading List
#chenmin #burma #chanbaek #myanmar #kaisoo
2.1K 159 3
𝑩𝒐𝒓𝒏 𝒕𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒕𝒆𝒄𝒕 𝒀𝒐𝒖
18.7K 1.6K 31
Unicode လီခနျြးမငျ - ကြှနျတျော ခငျဗြားနားက ဘယျ​တော့မှ ထှကျသှားမှာမဟုတျဘူးဆိုတာ ယုံစမျးပါ ရှောငျကငျြးဟိုငျ - ငါ တဈယောကျတညျးပဲနခေငျြတယျ ငါ့ဘဝထဲကို ဝငျလာဖို့ မကွိုးစားပါနဲ့ Zawgyi လီချန်းမင် - ကျွန်တော် ခင်ဗျားနားက ဘယ်တော့မှ ထွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ယုံစမ်းပါ ရှောင်ကျင်းဟိုင် - ငါ တစ်ယောက်တည်းပဲနေချင်တယ် ငါ့ဘဝထဲကို...
A Moon Shines In The World Over Yonder (Book - 1) (Completed)
31.7K 6.2K 46
အ​မှောင်​ထုသာ စိုးမိုးထားတဲ့ အခြားတစ်​ဖက်​မှာ .. ​ကျွန်​​တော်​က အလင်း​ရောင်​​ဖြာလင်း​ပေးရမယ့်​ လမင်း.. ကျိန်​စာလား လက်​​ဆောင်​လား ?? ကျွန်​​တော့်​ကံကြမ္မာကို အမြဲလိုလို သံသယ​ပေါင်းများစွာနဲ့ ​ကိုယ့်​က်ိုကိုယ်​ ​မေးခွန်းထုတ်​ခဲ့​ပေမယ့်​.. သီအိုက​တော့ ကျွန်​​တော့်​ဘဝမှာ ပထမဆုံး ​ဝေဝါးခြင်းမရှိ.. ပြတ်​သားတဲ့ လက်ေ...
4.3K 586 21
ဘဝကတိုတို‌ကလေး။ ခဏကလေးပဲ ကွငျနာခငျြရုံလောဘမှာ ပြျောရှငျမှုလေး နညျးနညျးဖွညျ့စှကျလို့ရမလား။
614K 51.3K 70
ယခုရေးသားထားသောအကြောင်းအရာများသည်စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်သာဖြစ်ပါသည်.. .. ..
636K 38.6K 121
vampireနဲ့လူသားတေ ဆက်နွယ်လာတဲ့အခါ ကြုံတွေ့လာတဲ့ အလွဲတေ အမှတ်တရလေးတေနဲ့ creative ကောင်းတဲ့ webtoonတစ်ပုဒ်ပါပဲ အခုမှ ပထမဦးမှ translateလုပ်တာမို့ အမှားပါရင် ခွင့်လွတ်ပေးကြပါနော်😁😁 တစ်နေ့တစ်ပိုင်းနှုန်းနဲ့ တင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်နော်😁😁
215K 17K 42
Legend of Tengu Love
11K 1K 57
Shen Wei only remember living with is uncle Chu since he lost his mother when he was 8 years old in his burn down village. They moved to make new life for themselves in Haixing Village where he madeaprecious friend, Zhao Yunlan. They are really close friends that grew up like brothers since Yunlan is their neighbor...
ဘု ရင့် အ ချစ် တော်
2.1M 72K 23
Yaoi Mature BDSM Rape ဤ Fiction တွင်ရေးသားထားသော အကြောင်းအရာများသည် အလွန်ဆိုးရွားနိုင်သောကြောင့် ကြိုတင်သတိပေးပါတယ်ရှင် ။
24.9K 639 53
Feisha falls into the trap Feisha Shi was about to lose it. The so-called Christmas feast only had vegetarian food, he could only tolerate it. His office lights flickered so much that the entire room was likeadisco; he tolerated that as well.
179K 1.5K 7
Sexအသုံးအနှုန်းများကြမ်းမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် မကြိုက်ရင်မဖတ်ပါနဲ့ အရေးအသားတွေက ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာအောင် ရေးတာမို့ မဖတ်ရဲရင်ဆက်မဖတ်ပါနဲ့နော်။ ကြိုပြီးသတိပေးပါတယ်။ ကွန်မန့်ထဲမှာ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် လာမန့်ရင် အကုန် ban ပစ်မှာပါ။ 🙂
WFYO - reupload
91.7K 4.2K 47
Author: 羲和清零 Genre: Virtual/reality game, modern, future Status: Completed - 161 chapters Summary: At the age of 15, He Jin found himselfa"husband" in an online game, their love was filled with loving affection and sweetness. However, because his study was being interfere with, his parent cut off the internet, he di...
158K 6.1K 167
Description At the age of 15, He Jin found himselfa"husband" in an online game, their love was filled with loving affection and sweetness. However, because his study was being interfered with, his parent cut off the internet, he didn't even haveachance to say goodbye and had to disappear from the game. 8 years lat...
602K 4.6K 78
1.2M 139K 52
This story book presented by Zawgyi & UNICODE. #Zawgyi သေမိန့်ကျပြီး လူတစ်ယောက်၏ နောက်ဆုံးဆန္ဒ #UNICODE သမေိနျ့ကပြွီး လူတဈယောကျ၏ နောကျဆုံးဆန်ဒ Cover Design By @Gin_hotarubi
Book(4,5,extra)Heaven Official's Blessing《墨香铜臭's 天官赐福》
723K 163K 56
Volume 4,Volume5and EXTRA 墨香铜臭's 天官赐福 Mo Xiang Tong Xiu's Tian Guan Ci Fu(Myanmar Translation)
145K 15.5K 20
'ပိုငျလငျ'ဟူသညျ့ ယနခေ့တျေလူငယျသညျ မိုးကွိုးအပဈခံရပွီးနောကျ သူ့ဝိညာဥျဟာ ဒဏ်ဍာရီခတျေထဲရှိ ဝိညာဥျပွိုကှဲနသေော 'ကြူဟနျ'ရဲ့ခန်ဓာကိုယျထဲရောကျရှိသှားပွီးနောကျ....
Living Will ( Completed )
91.1K 5.9K 40
Yuri comic ​လေးပါ ​ကောငျးပါတယျဖတျလို့ ကွိုကျမယျလို့​မြှျောလငျ့ပါတယျ #lynx
ငါ့ကိုမထိနဲ့ (Don't Touch Me) (Translation)
1.5M 142K 128
ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းလို့ Tran မိတာလေးပါ..
Cover Up(Myanmar Translation)
3K 126 11
အမာရွတ်တွေကိုဖုံးကွယ်ပေးတဲ့Cover Upအလုပ်လုပ်နေတဲ့ TatooistလေးGeum Hwa .... လူမိုက်ခေါင်းဆောင်ရဲ့သားSeung Jaeရဲ့ နောက်ကြောကအမာရွတ်ကိုဖုံးကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ် လူနှစ်ယောက်ကြားကTatooလိုမျိုးပုံပြင်တစ်ပုဒ်... GyaGa(갸가)ရဲ့ဖန်တီးမှုလေးကိုဘာသာပြန်ထား တာပါ။ Warning- Mature Contentပါ ကလေးတွေမဖတ်သင့်ပါဘူး🔞🔞🔞🔞🔞
287K 27.6K 70
သာမနျခရီးသညျတဈ ဦး ဖွဈသော Yin Chai သညျမတျောတဆမှုတဈခုကွောငျ့သဆေုံးခဲ့သညျ။ သူ၏စိတျဝိညာဉျကိုလူ့ဇာတိသို့ပွနျရောကျရနျ Yama ၏စုံစမျးမှုမြားကိုလကျခံပွီးအရညျအခငျြးပွညျ့ဝသော Hell Officer ဖွဈလာခဲ့လသေညျ။ မဈရှငျမြားစှာအောငျမွငျပွီးသညျ့နောကျသူကှယျလှနျခွငျးသညျမတျောတဆဖွဈခွငျးမဟုတျကွောငျးသူသိရှိလာခဲ့သညျ။ Yin Chaiသညျ အဘယျသို့ဆက...
173K 8.1K 25
junသညျတတိယမြိုးဆကျ chaebol ဖွဈပွီးအရာအားလုံးပိုငျဆိုငျပွီးနစေ့ဉျဘ ၀ ၏ငွီးငှဖှေ့ယျရာဖွဈနသေညျ။ တဈနတှေ့ငျသူသညျသူငယျခငျြးမြားနှငျ့အတူသီးသနျ့ဘားခနျးတဈခုတှငျသူတို့နှငျ့အတူလိုကျပါရနျချေါသောအမြိုးသမီးအခြို့နှငျ့အတူသောကျခဲ့သညျ။ သို့သျောသူသညျသခွေငျးနှငျ့လကျရှိဘဝ၏ခွားနားခကျြကိုတှေးမိသညျ။ စားပှဲထိုးတဈ ဦး သညျအခနျးထဲသို့ ၀ င...
The Dearest ( MM translation )
153K 4.1K 11
🚨🚨Shin ဆိုတဲ့ သူက twitter ပေါ်မှာ sexy model တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူရဲ့ one night stand ကိုရှာဖွေ နေခဲ့တယ် သူက ထပ်မချစ်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားပေမယ့် သူ့နှလုံးသားက လက်မခံတဲ့အခါ ...... 🚨🚨🔞 ပထမဆုံး translation လုပ်ဖူးတာ ဖြစ်လို့ အဆင်မပြေတာ ရှိရင် ကြိုပီး တောင်းပန်ပါတယ်ရှင့် , English လည်းအကျွမ်းကြီး မဟုတ်တဲ့ အတွက် လိုအ...
Ok so everyone struggles or have at least haven't felt confident when making the art of Japanese animation. No worries I'm here to help !
💞🌸 Japanese Names and Meanings 🌸💞
13.8K 156 4
Today, I'm going to be telling you some Japanese names and the meanings behind them!
82.2K 5.6K 19
One day,aguy died bacause of an accident. After that, what's gonna happen?! Status: Ongoing Author(s): Ppyong 2017 released Genre(s): Action/Drama/Supernatural/Yaoi I own nothing. Only translations from English to Myanmar are mine. I give credit to the original author.
Blood Link〘 블러드 링크 〙 💞💞
5.6M 353K 204
## သွေးနှောသမန်းဝံပုလွေ အဖြောင့်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာဆိုရင် ဗန်ဗိုင်းယားseme ရဲ့ကောင်းမှုကြောင့် တဖြည်းဖြည်းကွေးလာပြီး uke ဘဝရောက်သွားရှာလေသတဲ့😂😂 ##သှေးနှောသမနျးဝံပုလှေ အဖွောငျ့ကောငျလေးတဈယောကျဟာဆိုရငျ ဗနျဗိုငျးယားseme ရဲ့ကောငျးမှုကွောငျ့ တဖွညျးဖွညျးကှေးလာပွီး uke ဘဝရောကျသှားရှာလသေတဲ့😂😂
394K 45.7K 70
35.6K 2.9K 10
♥ငယ်ငယ်ထဲက ဝိညာဉ်တေကို မြင်နေလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ ကောင်ငယ်လေး ကို အကူအညီပေးမဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်......သူက.....Psychopomp♥
Yuki just an ordinary person. He want to collect money to pay his uncle debt. Ryuualeader ofagroup and have many club he owned. Yuki and Ryuu meet just coincidence till they fall in love with each other. But, Ryuu have so many enemies. What will happen to Yuki as he involve with Ryuu now?